Umgubo weziqhamo, odume kakhulu kunye nezibonelelo zawo Discover Discover Discover Online Online ➡️
Ukhetho olusempilweni kunomgubo omhlophe, umgubo weziqhamo yeyona nto ibalulekileyo kwabo bafuna ukunciphisa umzimba.
Umgubo weziqhamo awukho mtsha ncam. Nangona kunjalo, namhlanje kukho ukhetho oluninzi kunye neempawu, ukongeza kumathuba okuzilungiselela ekhaya.
1 Iindidi zeziqhamo zeziqhamo
2 Umgubo weBlackberry
3 Umgubo webhanana oluhlaza
4 Umgubo wekhokhonathi
5 Umgubo weapile
Iindidi zeziqhamo zeziqhamo
Ezona zithandwa kakhulu yiapile, umdiliya, ibhanana kunye neorenji. Ngaphandle kokuba ubhetyebhetye, unokuvelisa iiresiphi ngokubanzi ezenziwe ngomgubo wengqolowa wesintu, umgubo weziqhamo unexabiso elikhulu leevithamini kunye nee-antioxidants.
Ziveliswa kwiziqhamo ezomileyo kumaqondo obushushu aphantsi. Ngale ndlela, zonke izibonelelo zokuqala zeziqhamo ziyagcinwa. Ziyimithombo engakholekiyo yefayibha kwaye iphantsi kakhulu kwiikhalori.
Zityebile kwii-anthocyanins, amaqunube amnyama angamadlelane amakhulu kuthintelo lwezifo ezingenakubalwa. Xa buphelelwe ngamanzi emzimbeni kumaqondo obushushu asezantsi, iipropathi zabo eziluncedo kakhulu kwezempilo azilahlekanga, ke ngoko, umgubo wabo yinto elungileyo emzimbeni, kuba zityebile kakhulu kwiivithamini (ikakhulu i-K kunye no-C) kunye neetyiwa zamaminerali, ezinje nge potassium kunye ne zinc. , kunye nokuba ngowona mthombo ubalaseleyo wefayibha.
Kukwanokuthiwa umgubo unokulunga ngaphezu kwesiqhamo: iziqhamo kunye nomgubo ziqulathe izondlo ezifanayo. Nangona kunjalo, xa zikumgubo, zigxile ngakumbi, kuba umgubo wenziwe ngesiqhamo esikhulu.
Umgubo webhanana oluhlaza
Ukuziva ugcwele, ukulawula indlala kunye nokunciphisa i-cholesterol. Ewe konke oku kubonelelwa ngumgubo webhanana oluhlaza. Ngaphandle koko, inokwenziwa ngokulula ekhaya.
Iibhanana sesinye seziqhamo esityiwa ziintsapho zaseBrazil (kuqikelelwa ukuba umntu omnye utya ukuya kwi-24 kg yeebhanana ngonyaka), ikakhulu ngenxa yexabiso eliphantsi. Ngethamsanqa kuthi: iibhanana zityebile kwiswekile, iifayibha, i-niacin, i-calcium, i-phosphorus ngakumbi i-potassium. Kwaye elona candelo lililo kukuba zonke ezi zinongo zigcinwa xa iziqhamo ziguqulwa zangumgubo.
Ityebile kwifayibha nakumafutha alungileyo, ikhokhonathi ibonelela ngemvakalelo yokugcwala kwaye ngumthombo wamandla omangalisayo, emva kwayo yonke loo nto, ikwacebile kwiicarbohydrate. Iyamangalisa inkqubo yomzimba yokuzikhusela nakwinkqubo yokwetyisa, zonke ezi zinto zecoconut zigxile nangakumbi ngohlobo lomgubo.
Iapile, elinye lamandla kwezolimo laseBrazil, iluncedo kwiindidi ezahlukeneyo zokulungisa, kubandakanya umgubo. Ukongeza ekuncedeni ukunciphisa i-LDL (i-cholesterol embi), iapile iyanceda ukukhusela i-anemia, kuthintele ukuguga ngaphambi kwexesha, kunye nokomeleza amajoni omzimba. Ukongeza, inemicu emide kakhulu, ke iyanceda ekugayeni ukutya. Ngohlobo lomgubo, nokuba ngcono.